လက်ကားစက်ရုံစျေးနှုန်းထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းနိုင်သောမြေဆွေးအိတ် ၁၀၀% ပျက်စီးနိုင်သောပလတ်စတစ်အိတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများ | Skypurl
Suchi & သစ်သီးကွန်တိန်နာ
မြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်သောခွေး Poop အိတ်များ
Compostable Mailer အိတ်များ
PLA Clear ဖလား
Eco Compostable Rectangle အစားအစာကွန်တိန်နာ
Biodegradable Cornstarch အစားအစာ Tableware Tray
စက်ရုံစျေး ၀ ယ်ထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းနိုင်သောမြေဆွေးအိတ် ၁၀၀% ပျက်စီးနိုင်သောအမှိုက်ပလတ်စတစ်အိတ်
အိမ်သုံးအမှိုက်အိတ်များကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဖျက်ဆီးနိုင်သည့်ပြောင်းဖူးမှကစီဓါတ်နှင့် PBAT ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အမှိုက်အိတ်သည်လက်ဖြင့်ကိုက်ဖြတ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ စက္ကူအမာရွတ်သည်ပျက်စီးလွယ်ပြီး interface သည်လူသားဆန်သည်။ Biodegradable အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အမှိုက်အိတ်များကိုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအရွယ်အစား၊ အရောင်နှင့်ထုပ်ပိုးမှုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာကြီးကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်ကတိပြုသည်။
ပလတ်စတစ်တားမြစ်ချက်ကိုအတည်ပြုပြဌာန်းပြီးနောက်အမှိုက်အိတ်အဖြစ်ငါတို့ဘာကိုသုံးခဲ့လဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအတွက်သင်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးလွယ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုကိုဆယ်နှစ်ကျော်အထူးပြုထားသည်။
repurpose မြေသြဇာများကိုစီးပွားဖြစ်မြေဆွေးစက်ရုံများတွင်ရက် ၉၀ မှ ၁၈၀ အတွင်းဖြိုဖျက်ခြင်းဖြင့်တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်များကိုရေရှည်တည်တံ့သောအစားထိုးပေးနိုင်သည်။
မြေဇာပြုလုပ်နိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးစေသည်
Brand Name ပါ Skypurl
အရွယ်အစား ၁၃ စင်တီမီတာ x ၇ စင်တီမီတာ x ၃ စင်တီမီတာ
ထူးခြားချက် မြေဆွေး/ ဆန့်နိုင်မှု/ ယိုစိမ့်မှု
အရောင် အစိမ်းရောင်၊ အနက်ရောင် (သို့) သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း
အိမ်များ၊ ပန်းခြံများနှင့်ရုံးခန်းများတွင်လျှောက်လွှာအခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိပြီးနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုသည်အလွန်ကြီးမားသည်။ ဤ biodegradable အမှိုက်အိတ်သည်သာမန်ပလတ်စတစ်အိတ်များနှင့်ဆင်တူသည် biodegradable အမှိုက်အိတ်သည်မျက်ရည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်၊ လူသားဆန်သော breakpoint ဒီဇိုင်းရှိပြီးသုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်အရကွဲပြားသောအရောင်များဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
1. Compostable biodegradable ပစ္စည်း: ပြောင်းဖူးကစီဓါတ်နှင့် PBAT
2. Excellent ကတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်: ထုတ်ကုန်သည်ရေစိုခံပြီးအနံ့ဆိုးများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
3. အရောင်: နူးညံ့ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောပထမတန်းစားခံစားမှု
၄။ အဆီဓာတ်နှင့်ရေဒဏ် အပင်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောမျက်နှာပြင်သည်ပျော့ပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၅။ Breakpoint ဒီဇိုင်း ရယူရန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းကိုသာဖြတ်ပစ်ပါ။
6. OEM/ODM/စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ ပုံစံ၊ အထုပ်၊ အပြင်ပုံး။
ယခင်: အိမ်မွေးခွေးအိတ်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်အိတ် Poop အမှိုက်ပုံး Poop စိတ်ကြိုက်ခွေးအမှိုက်အိတ်များကို Biodegradable ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မြေ ost ဇာပြုလုပ်နိုင်သောကောက်နှံစာအိမ်သုံးအမှိုက်ဆွဲအိတ်များ
မြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်သော Cornstarch အိမ်သုံးအမှိုက်အိတ်များ
မြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်သော Cornstarch အိမ်သုံးတီရှပ်အမှိုက်အိတ်များ
မြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်သော Pla အိမ်သုံးအမှိုက်ရှုံ့အိတ်များ
စုပ်ယူနိုင်သော Pla အိမ်သုံးအမှိုက်အိတ်များ
စုပ်ယူနိုင်သော Pla အိမ်သုံးတီရှပ်အမှိုက်အိတ်များ
အိမ်မွေးခွေးအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်အိတ် Poop အမှိုက်ပုံး ...
Green Home Green Life စိမ်းလန်းသောကမ္ဘာမြေကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပါစို့
Changzhou Longjun Skypurl ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
လိပ်စာ: Education Town International Innovation Base No. 18 Charrgwuzhong Road, Wujin, Changzhou, China
Whatpp: +86 ၁၈၇၆၁၁၇၅၁၈၃
ပလတ်စတစ်များကိုတားမြစ်ပြီးနောက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း biodegrada ...